သူငယ်ချင်းတို့ ဖူးစာရှင်ဘယ်သူလဲ ရှာကြည့်ရအောင်...............! ~ ITmanHOME
01:04 အပတ်စဉ် ဗေဒင် No comments
သူငယ်ချင်းတို့ ဖူးစာရှင်ဘယ်သူလဲ ရှာကြည့်ရအောင်...............!
ပထမ အဆင့်က "က" နေ "အ" အထိ သည် ၁ မှ ၃၃ အထိဖြစ်နေသည်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ နာမယ်ကိုပေါင်းပါ
ဥပမာ လှလှ ဆိုပါတော့ လ သည် ဗျည်းများထဲတွင် နံပတ် ၂၈ ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် လှလှ ဆိုတော့ လ+လ=၂၈+၂၈=၅၆
ဒုတိယ အဆင့်က ပေါင်းလဒ်ကို ၉ နှင့်စားပေးပါ ။ ၅၆ ကို ၉ နှင်စားတော့ အကြွင်း ၂ ရပါတယ်။ အကြွင်းကို ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတဲ့ အကြွင်း ၀ = မင်းအရမ်း လေးစားသူ။
၁ = မင်းနဲ့ အသက်ကွာသူ ။
၂ = မင်းအရမ်းချစ်ရတဲ့သူ ။
၃ = မင်းအတွက်အရေးပါသူ။
၄ = မင်းကိုအမြဲတမ်းအလျှော့ပေးနေတက်သူ ။
၅ = မင်းရဲ့အဝေးတစ်နေရာကသူ ။
၆ = မင်းရဲ့ပထမဦးဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့သူ။
၈ = မင်းရဲ့အိမ်မက်တိုင်းမှာရှိနေသူ ။
ဦးကို ၁ လို့ယူရပါတယ် ခင်ဗျာ